Waa tan sababta Kiristanka Yurub ku caabudaa bikradaha madow: runta ayaa ugu dambeyntii la muujiyay - Afrikhepri Fondation
Tani waa sababta Masiixiyiinta ah ee Yurub u caabudi jireen bikrado madow: Runtu ugu danbeyntii shaaca ka qaaday
Akhrinta: 25 daqiiqo
Cwuxuu caado u yahay mabda'a haweenka, ee qadiimiga ah, waa geed qariya keynta weyn ee runta been abuurka ah.
1) Qarsoodi been ah iyo run been ah
Marka hore, dadka qaar ayaa isweydiin kara haddii uu jiro adeegsi dhab ah oo laga hadlayo "Bikradaha Madow". Tani waxay illaabaysaa in wax kasta oo la xiriira taariikhda adduunka iyo diimaha dadyowga Dunida ay daruuri noo tahay; laakiin waxaas oo dhan ka sareysa, tani waxay illaabaysaa in cibaadooyinka bikradaha madow ay aad uga weyn yihiin Yuhuudda-Masiixiyadda! Qarsoodigan beenta ah waxaa hayey kuwa been abuurka taariikhda tan iyo markii la aasaasay diimaha aabbahood misogynistic, oo haddii aad waqti siiso inaad akhriso maqaalkan, waad fahmi doontaa sababta qarniyo aan ugu duudduubnay bur!
Marka labaad, jiritaanka dhulka ee waxa loogu yeero Ciise weligiis lama muujin (waa isku mid runta awowayaashii Axdigii Hore). Si kastaba ha noqotee, waa inaan wajahnaa xaqiiqda: in ka badan bilyan bini aadam ah, meerahan oo dhan, waxay u hoggaansamaan diinta Roman Katooliga sidaas darteedna waxay ku tiirsan tahay diin ahaan, inta badan, go'aamada ay gaaraan reer Yurub ee ku saleysan Vatican-ka. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa in loo caddeeyo waxyaabaha xunxun ee badan ee fikradaha cunsuriyadda reer Galbeedku ay inta badan iska ilaaliyaan inay si sax ah ugu sharraxaan suugaanteeda, gaar ahaan sababta jiritaanka dhammaan Madonnasadan madow!
2) Ka qarsoon beenta ilaa runta
Xaqiiqdii, ma jiro wax qarsoodi ah "Bikradaha Madow". Marka hore, aan weydiino su'aalaha saxda ah jumlad:
- Muxuu Masiixiyiinta Yurub kuugu cibaadaystaa bikradaha madow marka midabka madow lagu daro fikrada masiixiga? Xajka waa arrin aad u muhiim ah waqtiyada dhexe ee xilli-ciyaareedka, madow waxay badanaa ku xiran tahay diabolical domain.
- Waa maxay sababta Pope John Paul II uu muhiimada ugu weyn u leeyahay Mad Madonna ee waddankiisa, Poland?
Maxay "bikradaha" ugu da'da weyn Afrika, Aasiya iyo Yurub midab madow?
- Maxay yihiin xiriirka ka dhexeeya kuwan "Bikradaha Madow" iyo Afrika hore, iyo in ka sii saxsan ilbaxnimada Dooxada Niil: Kemet iyo Kush?
Sidee ayaa Masiixiyiintu asal ahaan ugu xiran yihiin fikradaha dhaqamada Afrika?
- Waa maxay sababta nacaybka naceybka ah ee nacaybka iyo sababta ay u jahwareerka madow guud ahaan iyo Afrikaanka gaar ahaan? Ka baxsan cawaaqibka qoraallada cunsuriga ah, maxay yihiin sababta dhabta ah ee qoraalladan? Maxay taariikhda cunsuriyadeed ee cunsuriyadu isku dayayaan inay ka xadaan Blacks-ka taariikhda quruxda badan iyo gaar ahaan dooxada Nile?
- Maxaa ka horreeyay muuqaalka Masiixiyiinta "bikradaha madow"?
- Waa maxay doorka ay ka qaadeen wadaadnimada dadyowga leucoderm (Aryan, Yuhuuda, maqaarka cad ee carabta) ka ciyaara dumarka? Sideebaan uga tagnay madonna Madonna madow Madonna?
- Waa maxay sababta diinta Yuhuudda, diinta kiristaanka ama diinta Islaamku aanay ahayn xalka diinta ee Kamits? (The Kamits waa Blacks kuwaas oo ka warqabaya iyo ku faanaya sheekada dhabta ah iyo kuwa u dagaallamaya Renaissance Afrika.)
3) ISIS, ayeeydeena asaasiga ah ilaahadda madow
- Asal ahaan: shaqooyin badan oo casri ah ayaa xaqiijinaya in kaliya aysan ahayn kuwa ugu da'da weyn Homo sapiens sapiens Afrika (asalka Afrikaanka ee aadanaha casriga ah waxaa xaqiijiyay khubarada hiddo-wadaha, qadiimiga iyo taariikh-yaqaan) laakiin intaas waxaa sii dheer, kuwa ugu da'da weyn ilaahnimada la yaqaan waa naag madow. Waa dhab oo qaarbaa ka xumaada: “Ilaah horta naag buu ahaa; Ilaah baa ugu horreeyey Ilaah oo dhan ”. Rabitaan la'aanta ragga misogynistic-ka ah inay qiraan aqlabiyadda qadiimiga ah ee Hooyo Goddess waa xaqiiqo dhow oo taariikhi ah maxaa yeelay nidaamka oo dhan ee tixraacyada falsafada, diinta iyo madaniga ee Galbeedka hadda jira waa aabbo. Si kastaba ha noqotee, muddo dheer ka hor diimaha awoowayaasha ee ah Yuhuudda, Masiixiyadda iyo Islaamka, ilaahnimada gaarka ah ee dadyowga Dunida waxay ahayd mid dhedig ah, ilaah jinsi iyo lab ah oo ka imanaya Bariga (Qoraallada Baabil, Bilowgii, iwm. Muddadii hore, goobaha qadiimiga ah waxay dib ugu soo celiyeen sawirro badan oo dumar ah oo lagu tilmaamay "Venus".
Haweenkan leh badhida baruurta iyo naasaha mugga leh ayaa dhab ahaantii matalayaa ilaahadda asalka ah ee ka timid Afrika, Mistress Universal ka hor dhammaan "ilaahyada" tan iyo wakhtiyadii fogaa, bacriminta haweenku waxay ahayd mid qaali u ah tan dhul ay ku noolaadaan bulshooyinkaas bani'aadamku: laga soo bilaabo Paleolithic, waa taranka haweenka taas oo hubisay isu dheellitirka nolosha maadiga ah iyo si dabiici ah, waxaa lagu sharfay si waafaqsan; wakhtigaas, cibaadada haweenku waxay markaa muujineysaa sarreynta dumarka. Ilaa labadii kun ee sano ee ugu dambeysay ka hor xilligeenna, Yurub iyo waddammada Bariga Dhexe waxay u mataleen ilaahyadooda qaab dumar ah oo si cad u galmoonaya si looga saaro wixii mugdi ah.
5.000 sano ka hor, dhammaan muhaajiriinta ka tagaya Afrika wali waxay ahaayeen madow, ka horna duullaankii dadka reer Aryan ee ka yimid Aasiya, dhammaan dadka ku nool badda Mediterranean-ka iyo ilaahyadooda oo dhami waxay ahaayeen madow. Waxaa jira hoos-u-dhigga Madonnas-ka madow ee Masiixiyadda iyada oo la adeegsanayo asalka asalka ah ee Goddess laakiin sidoo kale hoos-tagga Kaaba, dhagaxa madow ee Islaamka ee loo yaqaan 'dhagaxyada madow ee foolkaane madow ee ilaahyada madow (Ibla Nera ee Sicily iyo Cybele oo ku taal Anatolia). Dalka Turkiga oo ah dal Islaam ah, waxaa sanad walba ka socda Xajka Madonna Madoow ee magaalada Efesos. Aynu u adeegsanno fursadda inaan ku tilmaanno Madonnooyinka madow meelaha laga yaabo inay ka yaabiyaan qaar ka mid ah: sida Kuuba ama kan Barxadda Cas ee Ruushka ee Ruushka; ama ka mid ah Olmecs; ama gudaha Andes. Herodotus, oo ah aabaha caanka ah ee taariikhda (reer Yurub), wuxuu dib u xusuustay in Afrikaanku ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee dhista Macbudyo Ma ahayn ilaa qarnigii 8aad ee dhalashadii Ciise ka hor in pantheons-ka reer yurub ay bilaabeen inay noqdaan raganimo badan iyagoon weligood baabi’in ilaahyada iyo gaar ahaan ilaahadda dhulka.
- From Isis Goddess la Madonnas madow, inta lagu guda jiro Millennium Ilaaheenna ah hortiisa waxay Zaman, iyo xataa shan qarni ka horeysay, ilaahnimada ugu weyn dunida Mediterranean ahaa ilaahadda Isis (Aset / ASETA), ilaahnimada African madow in ay asal ahaan Nubian. Isis waxaa lagu sharfay aag aad u ballaaran oo ku yaal dhammaadkii Casriga iyo horraantii diinta kiristaanka. Isis, Ilaahnimadu Hooyo Black kii dhaxalka lahaa xeerkii bulshada matriarchal Afrika, waxaa loogu yeedhaa magacyo badan oo ka baxsan Africa waxaa ka mid ah in of Ana, Dana, Inana, Ishtar, iwm ... Out of Nubia, gobolka halkaas oo ilbaxnimada ayaa la Shafay qarniyo badan ka hor ah Silanyo ee qadiimiga Masar (Kemet), ugu deeqay Isis ee Kemet, ka dibna inta kale ee dunida.
Isaga oo jooga meel quduus ah ee Philae, Isiis wuxuu ahaa madow iyo qurux badan! Tusaalooyinka Alchemical ee Astaanta Aasaasiga ah, Hooyo madoobaad ee bani-aadminimada iyo horey uga tirsanaa Black Madonnas iyo sidoo kale kuwa la afuufay ka dib. Marka laga eego dooxada microfoonka ee Niil, dhaqanka Isis ayaa run ahaantii noqon doona diinta ugu horeysa ee caalamiga ah iyo suudaanimada. Philae waxay noqon doontaa magaalo quduus ah oo loogu talagalay Afrikaanka, Giriigta, Roomaaniga, iyo reer miyiga. Dhaqanka qadiimka ah ee gaboobidda Haweeneyda Afrikaanka ah ee ka timaada Afrika ayaa ka horeysa doorka masiixiga iyo diinta Islaamka ee qarniyadii dhexe.
Sawirka ugu caansan ee Isis ee dhererka Boqortooyada Roomaanka ayaa u muuqda in Isis uu nuugayo wiilkeeda, Hor (Horus). The guuto ka Roman Empire, kuwaas oo ciidamada la dhisay nin oo u jideeyey, saddex qaaradood (Africa, Asia, Europe), oo siday image ee Isis Afrika, iyo sidoo kale images of Isis argaggixiyaan Cybele Inanna, Astarte, oo dhan adduunka la yaqaan, laga bilaabo Afrika ilaa Aasiya, ilaa Rome, Gaul, Land of Angles (England), iyo Danube. Caabuday by magacyo badan oo Africa, Asia, Empire Greek iyo Boqortooyada Roomaanka oo dhan, waxaa la yaqaan Isis, Hathor Meecaad, Sekhmet (Qaybta amaanaa Hooyo madow wakiil ka ah madaxa dumar ah libaax) Yemonja (Yoruba), Athena, oo Di'ana, Demeter-Persephone, Hera, Kali (India), Mahadevi Dravidian (Indus), iwm ...
Meroe, maanta Suudaan, diinta Isis waxay ku sharftay diinta ilaaha libaax madaxeed Apedemek iyo sidoo kale ilaaha Amun. Dhaxalka hooyada madow ee Afrika waa Xaq, Caddaalad, ka ilaalinta dhammaan dulmiga, ilaalinta kuwa la dulmay, iyo muuqaalka nolosha oo dhan. Iyada oo Hellenization, Isis uu noqonayo Hooyada Weyn ee Mediterranean; saaxiibkiis, Ousir (Asar-Ausar-Osiris-Ousiré) ama "Big Black" (Kem Our) wuxuu noqdaa Zeus, Pluto ama Dionysos.
Dunida la yaqaan oo dhan iyo qarniyadii hore ee xilligii Masiixiyiinta, addoommada iyo dumarka sharafta leh waxay caabudi jireen Isis sidii ilaah ka adkaaday xoogga jacaylka, naxariista, naxariista, iyo dareenkeeda shaqsiyeed ee murugada. . Muddo dheer Masiixiyiinta ka hor, diinta Isis waxay ballanqaaday nolol geerida dunida ka dib, iyadoo macbudyo Isis laga aasaasay Boqortooyadii Roomaanka, Gaul, Portugal, Spain, Brittany, Germania, Talyaaniga, gaar ahaan meelaha hadhow noqon lahaa meelaha barakaysan ee Madonnas Madow. Astaamo muhiim ah oo Isis ah, oo markii dambe lala xiriiriyay Madonna Christian, waxay ahayd naxariis hooyadeed. Waqtiyadii Masiixiyiinta, wiilkiisa Horus waxaa loo matalay inuu yahay Masiix. Biyaha had iyo jeer waxay la xiriiraan Isis maxaa yeelay waxay ka kooban yihiin tayo muqaddas ah. Waqtigaas, Marwada diinta ee Kemet, Isis waxay ku jirtay dariiqa "Ilaaha Hooyada". Sidaa darteed, ma jirin kala qaybsanaan udhaxeysa dumarka iyo raga wali. Waxay aad u jeclaayeen dumarka iyo ragga, yar iyo weyn, iyo dhamaan casharada bulshada. Mawqifkeeda Philae waxaa la abuuray intii u dhaxeysay qarniyadii labaad iyo qarniyadii ugu horreeyay BC, waxay ku qaadatay sistrum-ka hal gacan iyo iskutallaabta Ankh (astaanta nolosha weligeed ah) gacanta kale. Isaga oo matalaya (600 BC) Matxafka Qaahira, Isis wuxuu umuuqdaa kalkaaliso madow-hooyo wadata muuqaallo aad uqurux badan oo sawirada ah (icons, statuettes, iwm) ee Madonnas-kalkaalisadii hore ee Masiixiyada. Yaanan iloobin in xurmaynta Isis, ninkeeda Osiris iyo wiilkeeda Horus, ay ku adkaysteen dhammaan boqortooyooyinkii Fircoon. Sidaa darteed Isis wuxuu lahaa in kabadan 3.000 oo sano oo taariikh ah markii cibaadadeeda ay ka faafisay Meroe iyo Alexandria ilaa dhamaan wabiga Mediterranean. Saddexmidnimada "Isis / Osiris / Horus" waxay ku dhex jiri doontaa diinta masiixiga ee caanka ah "Mary / Joseph / Jesus" taas oo ka duwan saddexmidnimada katooliga katooliga ah: "Aabaha / Wiilka / Ruuxa Quduuska ah" (luminta xubinta dumarka Aabbaha iyo sarreynta militariga leucoderms).
In Memphis (Men-Nefer), Isis dabaal heeso sida civilizing, ilaahnimada universal kuwaas oo laga saaray ay qasheen, oogi sharciyada iyo mabaadi'da rabbaaniga ah iyo beeraha Been abuurtay, fanka iyo warqado, caadooyinka rabaani ah, iyo caddaaladda. Isis, Enchantress weyn, wuxuu ahaa sayidaddii of Medicine, iyo dhuuni cudurada aadanaha, madax qaaradood iyo badaha, ilaalinta ka dhan ah khataraha inta lagu guda jiro navigation iyo dagaallada. Isis ahaa ilaahnimada badbaadada si fiican. Dhamaan sifooyinkaas waxaan ka helnay Madonnas iyo Virgins madow. Walaalkiis Maati wuxuu ahaa ilaahii runta-cadaalada. aqoonyahan weyn ee diinta, Lucia Chiavola Birnbaum qabaa image ugu da'da weyn oo ka mid ah Madonna ee Masiixiyaddu waa in Sicily, waxay noqon laheyd madada Madonna dell'Adonaï (The Black Madonna of Adonai); iyada, oo ah meesha ugu da'da weyn ee Maryan (hooyadii Ciise) waxay ku taallaa Sicily. Cilmi-baaruhu wuxuu u guurayaa Talyaaniga (Basilica of Santa Maria Maggiore). Cilmi Jean-Pierre Bayard hadalka ku saabsan shukaansi Virgin madow ee France waqtiga Clovis, laakiin ugu da'da weyn ugu raadinayso in Africa (sokow in Clovis ka Africa iman). Ma muuqato wax aan macquul aheyn in la helo hal maalin madoob oo madow ee Masiixiyadda ah ee ka mid ah Copts of Egypt. Dhab ahaantii, Masar waa dalkii ugu horreeyay adduunka oo dhan si ay u aqbalaan masiixiyaadka sida diinta gobolka. Waxa ay ahayd Alexandria in markii ugu horreysay ee Axdiga Hore laga tarjumay Cibraaniga Giriigta. Alexandria wuxuu ahaa mid ka mid ah magaalooyinkii ugu horreeyay, Yeruusaalem, si uu u noqdo hoggaamiyaha kiniisaddu. Laakiin waxa ugu muhiimsan halkan waa xaqiiqda ah in dhammaan Madonnas iyo gabdhaha ugu da'da weyn taariikhda Kiristaanka ay ahaayeen kuwo madow. Aynu iloobin in wakhtigaas, madow mooyaane aan ahayn reer Masar! Madonnas Kuwani waa qaar ka mid ah sifooyinka ilaahadood iyo boqorado ee Masar qadiimiga ah (sida ubaxa), halka ilmaha (la muuqaalada dadka waaweyn) waxbay ushafeeci idanka usha Fircoon sifo ...
4) Jinniyeynta haweenka ee leucoderms iyo bleach of Madonnas
Kuwani waa Aryans ee Asia (Aryans ah, in ay tahay in la yidhaahdo "sharaf leh" ee Sanskrit, oo harag baan cadaalad ah oo indhaha buluuga ah) oo soo bandhigay ilaahyo lab Yurub ka yimid. The Minoan iyo Mycenaean ilbaxnimooyinka in la Shafay ee Mediterranean ee bilowgii Millennium BC saddexaad meel ku duruufaysnaa ku Peloponnese, Cyclades iyo Kereetee, ku xiga in duulaankii ugu horeysay ee Indo-Aryan, weli barbarta nidaam ee Goddess Hooyada .
Kaliya reer Aryan waxay caabudi jireen ilaahyo lab ah; waxay markii ugu horreeyeen woqooyiga Hindiya qiyaastii 3.200 BCE, iyagoo helay ilbaxnimo Dravidian ah oo aad uga horumarsan kuwooda. Waad ku mahadsan tahay guushoodii militari ee is xigxigay, Aryans waxay soo rogeen nidaamka cunsuriyada cunsuriyada. Runtii, ereyga "caste" ee Sanskrit waxaa loo yaqaan "varna" oo macnaheedu yahay "midab". Aryanku waxay had iyo jeer doonayeen inay ka fogaadaan isku dhafka jinsiyadaha, waxay weli ugu yeeraan maanta "musuqmaasuqa haweenka". Ma jiraan wax si cad u muujin kara in, falsafadda Aryan, nidaamka cunsuriyadda cunsuriyadda iyo hubaalnimada liidashada haweenka ay si aan macquul ahayn isugu xiran yihiin. Loogu talagalay Aryans, haweenka waxaa kaliya lagu hayaa jilitaanno, waana u hoggaansamiddooda nidaamkan dammaanad ka qaadaya xasilloonida bulshada iyo nadiifnimada akhlaaqda. Si kastaba ha noqotee, Rig Veda wuxuu si cad u muujinayaa qadarinta hoose ee ay Aryans u hayaan haweenka: “Maskaxda haweeneydu uma adkeysan karto edbinta. Caqligiisu waa miisaan yar. "
Waxaan halkaas ka helo, si laba iyo toban qarniyo ka hor xilligii Christian, oo barbaro la caddeeyo hufan, isku darka ee machismo iyo cunsuriyadda in lagu gartaa oo dhan dhaqamada reer galbeedka iyo si tartiib tartiib ah u wadin inuu soo design Ilaah lab a. Dunida ka dib waxay ka tirsan tahay ragga, samada ilaa cadaabta. Ilaah wuxuu noqon doonaa nin cadaan ah, cadowgiisuna Ibliisku wuxuu noqon doonaa nin madow. Dumarku waxay ahaayeen kuwo aan ka badnayn inta ka hartay dagaalyahanada iyo faragelinta carruurtooda. taariikhyahan The Diodorus sheegay in Aryans yihiin askar kulul oo hoose oo ay "jinsiyad" oo dhan "dagaal jacayl iyo mar walba diyaar u yahay tallaabo" iyo in arinku, waxaan had iyo jeer looga gudbi karo by dulanka . Wixii Aryans ah, haweeneydii ugu horeysay ee ninkeeda, ugu dambeyntii noqoto cadowga, ka hor inta aan la ogaanin Xasil.
Waxaan ka heli mid ah aragtidan Yuhuuddii ka dhex of Qarniyadii hore, tusaale ahaan warqadihiisii ​​Bawlos: "Waa kan Masiixa Madaxa nin kasta, madaxa naagtu waa ninka; oo madaxa Masiixana waa Ilaah. "" Tani waxay ninkii, dabcan, in la abuurin naagta aawadeed, laakiin naagtase ninka ma aha. "" Dumar yahow, noqdaan kuwo isku dhiiba nimankooda sida idinkoo Rabbiga u, runtii, ninku waa madaxa afada ah ... "" Intii lagu guda jiray baaritaanka, naagta waa in aan iska aamuso ee soo gudbinta. Uma ogolaanayo in naagtu ay barato ama ay xukuntid ninka. Ha iska aamuso. Waxay ahayd Aadan markii hore loo tababaray, ka dibna Xaawa. Iyo waxa aan ahaa Adam oo la qalday, laakiin naagtii baa inta la khiyaaneeyey waxay noqotay dembi ah xadgudub "(1Cor 11 / 3, 1 Korintos 11 / 8 in 11 / 9, 1 Korintos 14 / 34 in 14 / 35 EP 5 / 21 in 5 / 24, Col3 / 18, 1 TM 2 / 11 in 2 / 14, TT 2 / 5).
Waxaan sidoo kale ka helnaa aragtidan aabayaasha Kaniisadda Rome (tusaale ahaan Augustine) iyo qarniyadii dhexe ee Yurub markii dumarka lagu eedeeyay inay ku dhaqmayeen sixir kadibna nolosha lagu gubay. Quraanka kariimka ah, sida ku jirta Tawreedka, iyadu sidoo kale way ka liidataa ninka waana iyadu dambiga asalka ah. Dhaqankii hore ee Griiggu wuxuu keenay rabshadaha dadkan Aryan Indo-European ee ku soo duulay Makedoniya iyo Dalmatia ee kunka sano ee ka horreeyay xilligii Masiixiyiinta, iyagoo raganimo ka dhigaya isla markaana qalloocinaya sawirka hooyada ilaah madoobaadka ah, jirdilka iyo ka faaiidaysiga addoommada, isla markaana ka dambeeya haweeneyda nin. Halka wada noolaanshaha u dhexeeya ninka iyo naagta lagu yaqaan Afrika. Kadibna, dhaqankan Griiggu wuxuu noqday astaantii Aryan ee cunsuriyiinta iyo boqortooyooyinki yurubiyanka / Ameerika dhamaadkii qarnigii 19aad iyo Naasiyiinta qarnigii 20aad, oo leh "The White Supremacy" iyo kuwa raacsan ee casriga ah ee sii wadaya taranka iyo faafida cunsuriyada. .
Inkastoo burburinta macbudka Isis by boqorada Roman iyo qolooyinka reer Masiixiyada (xasuusta hooyada mugdiga ahaa transmuted galay xurmayn ee Our Lady, gaar ahaan uu images madow), dhaxalka reer Hooyo Black ku adkaystay in Art: Madonnas madow ee Europe oo ilaahyo kale oo madow dumar ah ee dunida ugu waa caddayn of xasuusta qoto dheer oo joogto ah hooyada madow ka Africa in kasta oo ay diimaha raggu sida awowyaasha-masiixiga iyo islaamka . Ka hor intaanay imaanin dadka reer Aryan, dadka reer Baadiyaha ah waxay ku jireen saameyn Afrika ah. Dagaalku wuxuu yimid Malta, Giriiga, Sicily iyo Koonfurta Talyaaniga, markii 2.500 av. Arians waxay ku soo duuleen gobolladan. Tusaale ahaan in Malta, duulay gudbin doonaa dad si nabad ah kuwaas oo lagu aasay ay ku dhimatay mucaaradka in ay ku soo duulay Aryan isticmaalay hub naxaas iyo gubo meydadkooda. Waxay ku soo rogeen nidaamkii qarniga ee dadyowga laga adkaaday (Malta, Sicily, iwm).
In badan ka dib, Roomaanku waxay ku guuleysteen inay ka adkaadaan Carthaginians (madow, Afrikaan-Kancaan) ka dibna boqoradii Byzantine ee Kaniisadda Bariga waxay soo rogeen baadari Masiixiyiin ah. Qarnigii 15aad, duulaankii Isbaanishku waxay keeneen baaritaanka Malta iyo Sicily. In kasta oo xumaantan oo dhami jirto, xusuusta hooyada madow ee madow ayaa is hortaagtay oo wali sii socota (isku darka Isis Afrikaanka ah ee Anatolian Cybele, reer Kancaan Astarté, Carthaginian Tanit, iyo Madonnas kale madow)! Kanaanis iyo Sumeriyaan waxay ka mid ahaayeen madowgii ugu horreeyay (homo sapiens sapiens) ee ka taga Afrika: xaqiiqooyinkan waxaa xaqiijiyay hidda-wadaha (tusaale ahaan: Cavalli-Sforza, et al. Taariikhda iyo Juqraafiga Hidda-wadaha Aadanaha). Sumeriyaanku waxay isku magacaabeen "dad madax madow" halka kuwa reer Kancaan oo ay Griiggu ugu yeereen Phoenicians, oo aan ka duwaneyn Griigga, ma haysan mania in lagu guuleysto. Rabshadaha Giriigga iyo Roomaanku waxay weerareen ilbaxnimadii ugu horreysay ee aan rabshad lahayn, taaso ahayd hooyada madow ee mudnaanta leh.
taariikhyahanadu Modern Eurocentric oo loo gudbiyo arrinta dambe oo kaliya in ay sibyls (dumarka nebiyado) Efesos Aasiya Samos in Greece, Cumae dhow Naples ee dalka Talyaaniga, ka hadlay dhibic ma Liibiya Sibyl Afrika. Waxyaabihii laga yaabo inay calaamad u noqdaan bilawgii taariikhda Afrika ee asalka adduunka ee Dhaqanka. Hase yeeshee, dhammaan Sibils waxay xusuusinayaan Hooyo Madadaalo ah iyo qiimaheeda. Haweenaydan ayaa loo gudbiyey ilaahyada ilaahyada. Madonnas iyo Black Virgins ayaa sidoo kale ka markhaati kacaya iska caabinta astaamaha ugu muhiimsan ee Afrikaanka ka soo horjeeda falsafadaha Nordic.
- Diidmada iyo burburinta Madonnas: Dad badan (Masiixiyiin iyo kuwa aan Masiixiyiinta aheyn), cunsuriyada, ayaa waxay doonayeen inay ka fikiraan in Madonna (Maria / Maria) ay gebi ahaanba dibedda u ahayd dhaqanka Masiixiyadda asalka ah. Qaarkood waxay yidhaahdeen (xitaa kiniisadda): "Muuqashadayadu waa madow maxaa yeelay tobannaan qiiqa shumacyo ku gubay iyaga ka hor ayay iyaga u garaaceen". Laakiin iyagu ma sharrixi karaan sababta qaybaha jidhku ay ahaayeen madow (wejiyo, gacmo), dharka iyo cadaanka indhaha aan la madoobayn (shumacyada waxay noqon lahaayeen kuwo xulanaya, iyaga oo ogaanaya qaybo ka mid ah sawirka ay doonayaan madow)! Dhamaantiisuba waa inay madow ahaayeen haddii ay sax ahaayeen. Kadibna waxay keeneen sababo kale oo isku mid ah, laakiin waxay ahayd lagama maarmaan in la ogaado in heyadahaas ay ahaayeen madow sababtoo ah kuwii soo saaray iyo rakibay iyaga si aad u doonayay, waana hubaa in kuwan madow ay ahaayeen horaantii hore.
Kolkaasay bilaabeen inay ku caddeeya aanu u caddayn Sidaana (ama statuettes). Kuwani "gabdhaha la mamnuucay" (badanaa by wadaaddada) waa tiro badan. Cilmi Jean-Pierre Bayard culayskan oo muhiim ah: kuwa Dijon, Moussages, Villeneuve-les-Avignon, Laroque, Pelussin, Rochefort-en-Terre, Manosque, Our Lady of Vauclair in Molompize ... Kale "Virgin bleached oo dahab ah Miyay ku jiraan Tournus, Avioth, Chappes. Qaar kale waxaa lagu halligay, gubay, lagu aasay, dhagxiyey, la xado ama la waayay. In 1794, taalada aad buu u gaboobay ee Black Virgin ee Notre Dame du garnaqayo oo lagu tuuray on dab lagushido iyo oohin of "Dhimashada in dalka Masar gubay! ". Waayo, Brotestanka, canshuurtii waxaa sabab u ah Masiixa iyo "in aan la Baxiira in ammaani Virgin ah." Brotestanka ku tirinayaa in waxyaalaha "Black Madonnas waa ka badbaaday nidaam jaahilka ah in ceshatay lahaa Mary." Sidaa darteed waxaa la codsaday in la burburiyo oo sanamyada, inta badan kuwa ka mid ah "Black Virgin, maxaa yeelay, waxay crystallize dareenka aaminka ah oo ay hayaan xisaabaadka ee shisheeye Qorniinku leeyahay." Tusaale kale waa sheekada Black Madonna ee Czestochowa ee Poland ma aha taalada laakiin dhacaa category ee walxood; ayay lagu sharfay by Pope John Paul II, kuwaas oo loo arko ka badan wax iyo waxay siinaysaa asaasmeen xajka muhiim maxaa yeelay, waxay dhihi, Luke ayaa rinji lahaa weji Mary on saddex deday looxyo beroosh ah ka "miiska ka tirsan qoyska Quduuska ah ee reer Naasared, miiska on taas oo Yehoshuah ha-Notzri u dabaaldegtay Cashada Last on fiidkii of Thursday Quduuska ah ". relic Tani waxay ku nijaasoobay wax boobaya ayaa 1430 iyo wejiga ah "Virgin" ayaa lagu sameeyay qaliin in Saber. Tani icon Byzantine bogsatay in style Yurub, oo ku beegnaa this tijaabada "meletariga ee khadadka, ganaax qaabeeyey."
Ugu dambeyntiina, sameynta Madonnadan madoow waxaa mamnuucay Vatican-ka. Kaniisada Rome waxay ka baqdaa bidcada iyo jaahilnimada. Iyagoo ka baqaya inay waxyi ka soo qaataan Apocrypha, qarnigii 18aad waxay u ololeysay sawirro khaldan oo malaasyo "bikrado ah" lagu xardhay oo buluug iyo caddaan ah, marka laga reebo wixii dareen shaqsiyeed ee farshaxanka. Waa lagama maarmaan in si cad loo kala saaro waxa aan ugu yeerno "Masiixiyiintii hore" (rafcaan qaadashada injiillada, gaar ahaan injiilka apocryphal) iyo waxa aan ugu yeerno "Masiixiyiinta, caddaanka, misogynistic, white-kitaabiga, kaniisada Yuhuudda-Christian., Roman, paulienne ”(oo loola jeedo fikradaha St. Paul, gaar ahaan waraaqihiisa iyo 4 injiillada canonical-ka ah, ayaa loo qoondeeyay baahiyaha sababta). Tanina waa sabab aad u fudud: markaan dhahno tusaale ahaan "Kaniisadda Masiixiyiinta", waxaan ka fikirnaa reer galbeedka iyo dhammaan xumaantooda (addoonsiga, duullaannada addoonsiga, Gumeysiga Franco-Afrika, dhaca hantida iyo alaabta ceyriinka ah, iwm). Laakiin markaan ka hadlayno "Masiixiyiintii hore", waxaan kaliya ka fikirnaa guud ahaan injiillada (apocryphal ama maahan) oo kaliya farriinta asaasiga ah ayaa halkaan innaga xiiseysa. Xaqiiqdii, "Masiixiyaddii hore" waxay ku jirtaa burbur xagjirnimo ah Yuhuudda iyo Axdigii Hore halka "Kaniisadda Roman-kitaabiga ah ee caddaanka ah" ay rabto inay dejiso sii socoshada Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub. Apocrypha of "primitive Christianity" wuxuu qiimeeyay Haweenka wuxuuna difaacay sinaanta udhaxeysa dumarka iyo raga halka kaniisada misogynist Pauline ay jinni iyo dumar liidato, qiimaynayso addoonsiga iyo addoonsiga iyadoo la isku daray fikirka cunsuriyada ee "dadka la doortay".
Waxaan si qoto dheer ka soo horjeeda la'aanta ah ee ixtiraamka haweenka, goobta ayaa Mary siiyey in Church Catholic Roman waa cusub (this site waa la diiday by Brotestanka). Waraaqaha Bawlos ayaa iska indhatiray Maryan waxayna quudhsadeen naagta. Injiilka Markos, Maryan ayaa lagu sheegay labo jeer. Matthew ayaa injiilka ma gaari ay abtiriskooda la Maryan laakiin Yuusuf (waa kan ninkii Maryan). Waxaan yimaadaan qaabdarro ee Golaha Efesos ee June 22 431) taas oo Mary lagu dhawaaqey Hooyo Ilaah, isku day in ay mag midnimadu lab ee Kiristanka: "Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah," taas oo badalay Trinity asalka ah " Aabe, Hooyada iyo Ilmaha ".
Apocryphal Injiillada Masiixiyadeed ee asaliga ah ee qiimeeya dumarka ma ahan mid ka mid ah kaniisadda Roman Patriarchal. Halkaas waxaa jiray xitaa Injiillada ay qoreen haweenka. Kaniisadda Caddaan-Biblical ah ayaa keli ah oo keliya afar Injiillada oo markii danbe la geliyay Suugaanta Cibraaniga ah.
Waxaan si xoog ah u dhignay oo xuddun u ahaa 1854 farriinta dabiiciga ah ee fekerka macquulnimada ee Pope Pius IX kaasoo caddaynaya dhalashada ilaahnimada Horus ina Isis.
Isbitaallada Ankheed waxay soo celinayaan iskutallaabta Masiixa, si kastaba ha ahaatee, calaamad Masiixi ah ma lahan oval haween ah.
Sidaa daraadeed, ma awoodno inaan ku siino wax niyad-jab ah oo nuqul ah oo aad u xun oo qaadaya waxa uu u baahan yahay iyo wuxuu diidaa waxa dhibaya.
Kiniisadda Roomaanka ee White-Kitaabka Quduuska ah ayaa habeeyey waxbarashadiisa caadooyinka qadiimka ah ee White Aryan, marka ugu horeysa, ma kici kari waayeen. Waxaa bilaabmay inay noqdaan kuwo takoorid ah iyo sidoo kale isbitaallo qasab ah (oo ka dhan ah nooca Leucoderms). Dhammaan tani weligeed ma socon karto! Dhanka kale, waxaa jirey xaddi badan ama juhal-celinta qoraallada, been abuurka, ka tirtiritaanka dumarka, Masar ee Fircoon-madow, iyo Summan.
Waa in aan la iloobin in dadka, maskaxda caadiga ah, ay metelayaan ilaahyadooda muuqaalkooda. Sida François Ribadeau Dumas ayaa si wanaagsan u dhigtay: "Ilaahnimadu waxay ka muuqataa nooca morphological ee deegaanka". Si kale haddii loo dhigo, Goddess Isis waa madow sababtoo ah dadka reer Masar waxay ahaayeen kuwo madow (dadka nafsiyan ahaan caadiga ah). Dhinaca kale, arrintan wax dhib ah uma hayso dadka neeroterada ah ama dadku si weyn u dhaqan ahaan dhaqameed, si ay u aqoonsadaan ilaahyada dadka ku dhaqma dhaqanka, dhaqaalaha ama militariga.
Shalay, tani waxay ahayd kiiskii Europe: Sababtoo ah sannadka 1000-aad ee Yurub - iyo gaar ahaan Faransiiska - muraayadaha "Maryan oo bikradda" ah ayaa rinji madow, halkaasoo cirifka cad uu ku fido? Sababtoo ah ilaa wakhtigii Charles VIII, boqoradda Faransiiska ayaa barooranaya caddaan? Waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la sugo 1498 si loo arko bedelidda caadadan: dhimashada Charles VIII, Anne of Brittany dharka madow. Waa in la ogaadaa, si kastaba ha ahaatee, in Masar hore, caddaanku wuxuu ahaa midabka barafka (caadada Osiris, godka kuwa dhintay, strips of mummies, iwm ...).
Gauls xardhanaa ee Sidaana of Ana, Isis Goddess ah, pantheistic ilaahadda in basalt madow iyo boqorkii a of France yaqaan kuwa dhawrsada Louis XI baxsaday qaraqmeen by talineyso in "Black Madonna" of Our Lady of Béhuard .
Waxaa jiray xitaa ka dib markii muuqaalka kore ee Sidaana "cad Virgin" in la suuxay, waayo, qiimo badan iyo adkayn Xajka ah si ay u horumariyaan hab qaali ah (Virgin ee Marsat, Clermont-Ferrand, Brioude). Maxaa yeelay, midab ama ma, awood bogsiinta ka mid ah Madonnas madow ee loo yaqaan oo ay aad u sharrifnay Binii (Miracles, dad badan oo hordhigaya mahadnaq ee aaminka ah, iwm ...). Dhanka kale, waa in si taxadar leh loo xusuusnaado in ku dhawaad ​​dhammaan gabadhaan madow ay ku yaalaan meel u dhow gogol mucjiso ah. Kaniisada Cadaanka ah ayaa aqbashay xajinta "Black Bikors" iyada oo aan wax faallo ah ka bixin sababaha asturahaas ama been abuurka dhabta ah.
Kirismaska ​​Masiixiga, oo la dejiyay 25-kii Diseembar intii lagu jiray qarnigii 4aad, wuxuu beddelayaa iiddii dhalashada Horus, oo lagu dabaaldegay Alexandria isla taariikhdaas, Diseembar 25 (29 Khoiak), oo ah xaflad lagu xusay amarka Kanope ee uu soo saaray Ptolemy III Evergeta sanadka 238 BC. J.-C.
Isku-dhafka Osiris waxaa loo barbar dhigi karaa xishoodka Ciise, laakiin doorka muhiimka ah ee uu ka ciyaaray Maria Magdalenian ayaa ka tirtirtay Kaniisadda wadaadka ee White-Biblical. Injiilka Masiixa laguma magacaabi karin.
Kahor intaanay noqon meel diinta Yuhuudda, Mount Sinai waxaa loo yaqaanay Buurta Ilaah waxayna ka mid ahayd xilligii Maarta ee Dhaqanka Afrika tan iyo markii ay ku taallay Xaramka Har Karkom. Xaqiiqdii, horeyba waxay u ahayd buur xurmo leh ... muhiimad weynna u leh ... madow! Seynisyahanno ku saabsan socdaalka qadiimiga ah ee uu hogaaminayo Emmanuel Anati ayaa burburiyey runta kitaabiga ah ee laga qoray meeshan. (Saamaynta falsafadda Afrika ee Kemet ee masiixiyadda asaasiga ah iyo islaamkii ugu horreeyay, waxaan kugula talineynaa inaad tixraacdo shaqada Professor Sarwat Anis Al-Assiouty).
Maanta, Afrika, waa wadaaddo iyo wadaaddo dareen la'aan ah oo beddelay adeegayaashii cadayd ee shalay. Dadkani waxay kufaraxsan yihiin caqiidooyinka la soo rogay waxay soo bandhigaan ilaahyadooda oo ah cadaan Ciise oo caqabad ku ah jinniyada diimaha Afrikaanka, tusaale ahaan Vodou ee Benin. Waa wax lala yaabo in lagu arko aragtidan afrikaanka ah ee ku takhasusay fikirka midabtakoorka ee weli ka tagay Vatican, taas oo maanta aqoonsanaysa in Vodou uu yahay diin sida mid kale! Benin, udhexeeya 2004 iyo 2005, ma jirin wax ka yar kaniisadaha cusub ee 500. Fadlan, Kuwaas oo ah kuwa xiiran oo ah ilaah akhri ah oo Aryan ah, waxaa jira meelo lacag ah oo khiyaaneya daciifka iyo nadaafadda, oo waxaa si fiican loogu yaqaanaa meel sare oo ay dadka hurdada ka maqan yihiin musuqmaasuqa.
Gabagabo: Ilaah - Miyir-beelka aadanaha - sida karti-gaar ah oo awood leh ayaa mar waliba aan jirin. Humanity ugu horeysay soo maray qaalib ee madow Great Goddess, Hooyo muhiim Oo ilaahyada hortooda lab ah, "Ilaah wuxuu ahaa ugu horeysay Goddess". Diinta Masaarida ayaa kor u kacday illaa iyo hoos udhaca Awoodda reer Kemet oo ah meel aad u muhiim ah oo loo yaqaan 'ASET-ISIS'. Tani waa godad madow oo Afrikaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda jiritaanka Madonnas iyo Bikradda. Christian "Notre Dame" wuxuu ku leeyahay wax kasta oo ku saabsan Hooyo iyo Primal Afrikan Madow. Waxaan u nimid hubaal: Madonnas ugu da 'weyn iyo' gabdhaha 'taariikhda masiixiga waa madow. gudcur Tani waa inta badan ay sabab u tahay syncretism ee nidaam ee Goddess Black Isis la nidaam Maryan (Maria) ee hore Masiixiyada, dhaqay sababta weedhu isagoo nooca Alchemical hillaadiyo waqti mustaqbalka. Ciise, ina Maryan, uu leeyahay tayada Asar-Osiris ninkeeda of Isis qasan dhowr tayada Xor Horus, ina Isis.
- Hore waxa ugu horreyn saameyn weyn ku leh falsafada Afrika ee reer galbeedka oo ku saabsan diinta kiristaanka iyo diinta islaamka, laakiin dhammaadka (maanta) farqiga badan ee mabaadi'da asaasiga ah, gaar ahaan doorka ay tahay in lagu ciyaaro sheyga haweenka iyo falsafadda Maat. Diinta Yuhuudda, Kaniisada Katooliga Romaniga ah (kuwa St. Paul) iyo Islaan waxay yihiin kuwo fiilooyin ah oo ku saabsan dhammaan nasiib-darrada dadka madow: Yuhuudda ayaa sidoo kale jilicsanayd madow. Kaniisada Christian - oo ah, Galbeedka - iyo Islaan, tan iyo markii ay qabsadeen Carabta Afrika, waxay kufsadeen madhaxda iyo weli maanta, Galbeedka waxay sii wadi doonaan silcinta Afrika iyo kheyraadka dabiiciga ah.
- Xitaa dhaqanka Black Stones (dheer ka hor Kaamaha, dhagax madaw oo madow ah ee Islaan) waxay asalkoodu ka soo jeedaa Afrika iyo illaa maanta maanta madonnas madow waxay "iska caabiyeen", sida Masiixiyadda ee Europe (Jarmal, Caalamka Muslimka ah (Aljeeriya, Turkiga). Wadanka Austria, Belgium, Spain, France, Great Britain, Holland, Hungary, Hungary, Italy, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Romania, Sicilia, Switzerland, Czechoslovakia).
- Aryans la Rig Veda iyo Yuhuuddii oo Tawreed ah u muuqataa in ay soo bandhigay koowaad ee cunsuriyada lagu yaqaan in ay taariikhda. Dadkani waxay isu bar-tilmaameedsadeen kuwo ka sarreeya ama "dad la doortay", "jinsiyadda madaxdooda". Waxay jinni iyo dumarka madow ku garaaceen. War iyo wax alaabo waxaa deified sida uu u malaynayo "sababta oo ah xooga badan mar walba waa ugu fiican, sababtoo ah timaado Guul kaliya xaq u rabaani ah. Ilaahyadu waxay kufaraxayaan seefta iyo reer guuristu waa inay noqdaan kuwo guuleysta oo sidaas daraadeed. Markaas khuraafaadka Masar Sumerian aragnimo Afrika inta lagu jiro ama kunkan sanadood ee la soo dhaafay si lama filaan ah double ah Christianization ah Maraqa Yurub (awowyaasha-Masiixiyaddu maaha in lagu khaldo hore Masiixiyada) iyo Islaamka ah Maraqa Carabta. Kuwani diimaha cusub gadaya oo bulshada raggu in aakhirka laga takhaluso fikradda ah Hooyada / Goddess madow ah qiraysaa ka Africa, uu falsafada nabad iyo muhiimada Haweenka horumarka dhabta ah ee bani-aadmiga, oo leh natiijo-ciqaab, ciribtirka suurtogalka ah ee noocyada.
- Jirdilka Aryan iyo Semiticka ee Patriarchate ayaa sidaas ka gaabsaday madadaalada nabada laakiin xusuusta asxaabnimada asaliga ah ayaa weli ku sugan waddamo badan. Si kastaba ha ahaatee, maanta oo Afrika ah, waa madow iyo hunguri-hungers kuwaas oo u muuqda in ay yihiin difaacayaasha ugu fiican ee diinta gumeysiga. Dib u noqoshada Afrika waa muhiim.
- Waxay sii wadi doontaa in laga takhaluso tuugada Afrika iyo ka caawinta dibad-baxa u dhexeeya Kamits inay midoobaan wadamada Afrika si ay u noqdaan Renaissance ee Caddadka Gacanta.
Warbixintii ugu danbeysay: bilawgii haweenaydu waxay ahayd ilmo madow oo Afrikaan ah oo dunidu u dhaqantay.
PS: Waxaan qodobkan u sharaxay dumarka oo dhan la dulmiyay, kufsaday, jirdiley nidaamkii wadaadnimada - iyo wargeyska! - dhammaan haweenka ku geeriyooday rabshada bani-aadmiga. Nasiibkooda ha helin, mahadsanid maqaalkani, nasashada weligeed ah ama rajada isbedel xagjir ah laakiin sidoo kale xaqiiqda ah in aynu halkan ku hogaamineyno dagaal sharci ah oo aan ku ridno Haweeneyda dib ugu soo laabaneysa waa inayan weligeed ka tegin!
"Runtu way u eg tahay dabka; wuxuu gubaa oo dhibaa; laakiin ma jiri doonto kacaan la'aan iyada oo aan la xoreeyn haweenka. Ma jiro xor ka ah haweeney aan lahayn kacdoon ". Ankh, Oudja, Seneb!
• Cheikh Anta Diop, Dhaqanka ama Barbaarinta, Haysashada Daabacaadda Afrika, 1981
• Cheikh Anta Diop, Dabeecadda Dhaqameedka Negro: Khiyaaliga ama Xaqiiqada Taariikhda? Soo-jeedinta daabacaadda Afrika, 1967
• Cheikh Anta Diop, Black African Precolonial, Presence Africanine, 1960
• Ivan Van Sertima, Waxay Cameeyeen ka hor Columbus, joogitaanka Afrika ee Ameerika, New York, Guri Aqoonsi, 1976
• Madaxwayne Williams, Burburinta Madadaalada Madadaalada, War Saxaafadeedka Saddexaad, 1974
• Runoko Rashidi, Taariikhda Millennium ee Afrikaanka Aasiya, Qoraalka Caalamiga ah ee Caalamiga ah, 2005
• Martin Bernal, Black Athena, Rootiyada Afro-Asiatic ee Dhaqanka Naqshada, Editions Press Universitaires de France, Volume I, 1987 iyo Volume II, 1991
• Dominique Arnauld, Taariikhda Kiristaanka ee Afrika, Qoraalka Karthala, 2001
• Roger Garaudy, Argagix galbeedka, Al Qalam Publishing, 2004
• Sarwat Anis Al-Assiouty, cilmi baaris isbarbardhig ah oo ku saabsan Masiixiyiintii hore iyo tan Islaamka marka hore, Cadadka I (1987), II (1987) iyo III (1989), Addoomada Letouzey & Ané
• S.Cassagnes-Brouquet, Black Virgins, Calaamadaha Dukaanka
• J. Huynen, Enigma ee Bikrado Madow, Calaamadaha JMGarnier
• Jacques Bonvin, Wirgins Noires: Jawaabta waxay ka timid dhulka, Éditions Dervy
• Gerald Messadié, taariikhda guud ee Ilaah, Editions Robert Laffont, 1997
• Lucia Chiavola Birnbaum, Hooyo madow, qorayaasha Doorashada Doorashada, 2001
• Jean-Pierre Bayard, Hooyooyinka Goddesses iyo Black Virgins, Éditions du Rocher, 2001
• Roland Bermann, Gabadh bikrad ah, mashruuc caan ah, Editions Dervy, 1993
• Laurence Albert, Copts, Iimaanka lamadegaanka, Editions de Vecchi, 1998
Lasoco Qeybta Verable w (2017)
Daawo Kaliya Kaligeed Noqon Kartaa: Kulankii Ugu Dambeeyey (2007)
Cola nuts: waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ogaato
Asalka madow ee Tango
Whitney: Xaquuqda Inaad Ahaato - Documentary (2018)